मेसि र रोनाल्डोको भन्दा उत्कृष्ट थियो मालदिभ्सबिरुद्ध मनिषको गोल, कोरियामा स्कुल लिग खेलेका मनिष को हुन? – Eps Sathi
October 4, 2021 958
काठमाडौं । युवा अट्याकर मनिष डाँगीको निर्णायक गोलमा नेपालले साफ च्याम्पियनसिपमा सुखद् सुरुवात गरेको छ । शुक्रबार माल्दिभ्सको मालेमा भएको साफको दोस्रो खेलमा नेपालले आयोजक टोलीलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । नेपालको जितमा मनिष डांगीले निर्णायक गोल गरे । नेपाल यू–१९ टोलीका सदस्यसमेत रहेका मनिषले खेलको ८५ मिनेटमा गोल गरेका हुन् । जुन गोल काउन्टरमा सम्भव भएको थियो । यसअघि मनिष स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठको स्थान दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेको थिए ।
राष्ट्रिय टोलीको लागि यो मनिषको दोस्रो गोल हो । यसअघि उनले पहिलो गोल इराकविरुद्ध गरेका थिए । जुन खेल उनको डेब्युसमेत थियो । यससँगै नेपालले साफ च्याम्पियनसिपमा माल्दिभ्सविरुद्ध पहिलो जित निकालेको छ । यसअघि पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा समाप्त भएको थियो । दुबै टोलीले केही अवसर बनाए पनि सदुपयोग भने गर्न सकेनन् । खेलमा नेपालको तुलनामा घरेलु टोली माल्दिभ्सले दबाब बनाएको थियो ।
जितसँगै नेपालले सिंगल राउण्ड रोबिनको लिगमा महत्वपूर्ण तीन अंक हासिल गरेको छ । अब नेपालले दोस्रो खेलमा १८ असोजमा श्रीलंकाको सामना गर्नेछ । हिजो नै भएको पहिलो खेलमा श्रीलंका बंगलोदशसँग १–० गोल अन्तरले पराजित भएको थियो ।
दक्षिण कोरियामा हुर्किएका मनिष तीन वर्षदेखि नेपालमा फुटबल खेल्दै आएका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा मनिषको परिवार कोरियामा बस्दै आएको छ। उनका बुबाको सात वर्षअघि कोरियामै निधन भएको थियो। बुबाको इच्छा छोराले नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट फुटबल खेलोस् भन्ने थियो। त्यसैले मनिष नागरिकता बनाउने उमेर पुगेपछि सन् २०१८ नेपाल आएका थिए।
संयोग मान्नु पर्छ नागरिकता बनाउन नेपाल आएको बेला उनले सहिद स्मारक सी डिभिजन लिग खेल्ने मौका पाए। उनले त्यतिबेला खालीबारी क्लबबाट खेलेका थिए। अन्तिम तीन खेल खेल्दै पाँच गोल गरे। सो सिजन खालीबारी सी डिभिजन लिग च्याम्पियन बनेको थियो।
त्यसपछि सन् २०१९ मा उनले यू-१८ साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टिममा स्थान बनाए। नेपालको यू-१८ टिमका तत्कालिन प्रशिक्षक चेतनारायण श्रेष्ठले मनिषको खेल्ने शैली कोरियन फुटबलरको जस्तै भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनी मैदानमा तीव्र गतिमा बल कुदाउन र नियन्त्रण गर्न माहिर छन्। पाएका अवसरमा उनी कमै चुक्ने गर्छन्।
मनिषको खेल हेरेपछि प्रशिक्षक श्रेष्ठले पाएको अवसर मध्ये मनिषले ९० प्रतिशतलाई उपयोग गर्ने दाबी गरेका थिए। मनिषले सन् २०१९ मा नेपालमा भएको यू-१८ साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाली टिमको पहिलो रोजाइको फरवार्डको रूपमा खेलेका थिए। प्रतियोगिता उनले माल्दिभ्सविरूद्ध बराबरी गोल फर्काएका थिए। भुटानसँगको खेलमा ३-० गोलले पराजित भएपछि नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो।
मनिषले नेपालको यू-१९ टिमबाट पनि खेले। सन् २०१९ मा इरानमा भएको एफसी यू-१९ च्याम्पियनसिपको समूह ‘डी’को छनोटमा मनिष नेपाली टिममा थिए। मनिषले दश वर्षको उमेर फुटबल खेल्न थालेका थिए। कोरियाको एकेडेमीमा फुटबल सिकेका उनले सन् २०१७ मा कोरियाको जुनियर हाइ स्कुल लिग खेलेका थिए। त्यतिबेला उनी जुनियर लिगको उच्चगोलकर्ता भएका थिए।
जुनियर स्कुल लिगमा उत्कृष्ट खेलेपछि उनी पोचेओन सिटिजन एफसीको युथ टिममा आवद्ध भएका थिए। त्यसपछि उनले कोरियन फुटबल एसोसियनले आयोजना गर्ने क्षेत्रीय प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर पाए। कोरियामा उत्कृष्ट खेलेपछि उनको नेपालमा समेत चर्चा हुन थालेको थियो।
यो हो नि नेपालको गोर्खे तरिका…..
सुरुआत हो, अब नेपालले खेल्नेछ#SAFFChampionship2021 #nepalvsmaldives pic.twitter.com/lkOQ1XZx6p
— Chandra Kafle (@chandrakafle) October 2, 2021
Prevकोरियाले कामदार लाने प्रकृया सुरु, सिसिभिआइ फाराम खुल्यो (सूचनासहित)
Nextकोरियामा हुण्डीबाट पैसा पठाउनेहरुको नाममा, राज्यप्रतिको सामान्य दायित्व पनि पूरा नगर्ने?
कोरियाको खिम्ची निर्यात अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै